စိတ်ဓာတ်ကျနေတဲ့အချိန် အနားမှာဖေးမကူညီပေးတဲ့တစ်ယောက်ချင်းစီကိုကျေးဇူးတင်စကားပြောလိုက်တဲ့ အဆိုတော်ယုန်လေး
စိတ်ဓာတ်ကျနေတဲ့အချိန် အနားမှာဖေးမကူညီပေးတဲ့တစ်ယောက်ချင်းစီကိုကျေးဇူးတင်စကားပြောလိုက်တဲ့ အဆိုတော်ယုန်လေး တေးသီချင်းတိုင်းကို ကိုယ်တိုင် ဖန်တီးရေးသား သီဆိုသူကတော့ အဆိုတော် ယုန်လေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာ အဆိုတော်တစ်ယောက်ဖြစ်ရုံသာမကဘဲ ဒါရိုက်တာတစ်ယောက်အဖြစ်နဲ့ပါ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးတွေ ရိုက်ကူးနေရတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ သူရိုက်ကူးတဲ့ ဇာတ်ကားတွေဟာလည်း ပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးနှစ်ခြိုက်မှုတွေ ရရှိထားတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ သီချင်းဟောင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်တဲ့ ” […]
စည်းလုံးစေချင်လို့ MTV လုပ်တဲ့ ယုန်လေးကို အစည်းအရုံးကထုတ်ပေမယ့် အပြာကားသာသာရိုက်နေတဲ့ ဒါရိုက်တာတွေ မင်းသားမင်းသမီးတွေကိုတော့…….
စည်းလုံးစေချင်လို့ MTV လုပ်တဲ့ ယုန်လေးကို အစည်းအရုံးကထုတ်ပေမယ့် အပြာကားသာသာရိုက်နေတဲ့ ဒါရိုက်တာတွေ မင်းသားမင်းသမီးတွေကိုတော့……. အဆိုတော်ယုန်လေးရဲ့ MTV နဲ့ပတ်သက်လို့ မြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးက ရာသက်ပန်ထုတ်ပယ်တယ်ဆိုပဲ။ သူရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ ဗွီယိုဖိုင်ထဲမှာ အမှားတွေပါတယ်ထားပါ- လက်ဆယ်ဖြာနဲ့ ကန်တော့တောင်းပန်ထားပီးပီ။ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ စည်းလုံးညီညွတ်စေချင်တယ် ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ လုပ်ခဲ့တာပါဆိုတာလည်း ၀န်ခံထားတယ်။ ဒါကို မကျေနိုင်မချမ်းနိုင် […]
ရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးကို ယုန်လေးအတွက် ဦးဆောင်ပြီး တောင်းပန်ပေးဖို့ ကြိုးစားနေတဲ့ မြင့်မြတ်
ရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးကို ယုန်လေးအတွက် ဦးဆောင်ပြီး တောင်းပန်ပေးဖို့ ကြိုးစားနေတဲ့ မြင့်မြတ် အဆိုတော်ယုန်လေးရဲ့ ငါတို့အားလုံးရဲ့မြေ သီချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဂယက်ရိုက်နေကြတာကိုတော့ ပရိသတ်ကြီးမြင်တွေ့ကြမှာပါနော်။ သီချင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး ဝေဖန်မှုတွေမရှိပေမယ့် MV သရုပ်ဆောင်ချက်တွေ အပေါ်မှာ ဝေဖန်မှုတွေများစွာရှိနေတာကြောင့် အဆိုတော်ယုန်လေးကိုယ်တိုင် သူ့ဖေ့ဘုတ်ကနေပြီး စာနှင့်တစ်မျိုး Live လွှင့်ပြီးတစ်မျိုး ပရိသတ်ကြီးနှင့် အနုပညာရှင်တွေကို တောင်းပန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ […]
​ရွှေ(၁)ပိဿာ ​ငွေသားသိန်း(၃)ထောင်နဲ့ တင်တောင်း ခံလိုက်ရတဲ့ သတို့သမီး
​ရွှေ(၁)ပိဿာ ​ငွေသားသိန်း(၃)ထောင်နဲ့ တင်တောင်း ခံလိုက်ရတဲ့ သတို့သမီး ယခုခေတ် မှာ အချစ်စစ်ရှိရုံ နဲ့ ဘဝကြီးပြည့်စုံသွားတယ် ဆိုတာကလည်း 100% မမှန်ကန်တော့ ပါဘူးနော်။ဘဝ တစ်လျှောက်လုံး ချစ်ချစ်ခင်ခင်ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေထိုင်သွား ဖို့ဆိုတာကလည်း အရာရာအဆင်ပြေချောမွေ့နေမှ ဖြစ်မှာပါ။ မိန်းကလေးရှင် ဘက်ကို ငွေနဲ့တန်ဖိုးဖြတ်ဝယ်ယူတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ ယခင်တည်းက ဓလေ့ထုံးတမ်းစဉ်လာတွေအရ ယောက်ကျားလေးတွေဟာ […]
ခရစ်ယာန် တရားဟောဆရာ စောဒေးဗစ်လားနှင့် ဦးဝေထွန်းတို့ ကို အလုပ်နှင့် ထောင်ဒဏ်(၃)လ ချမှတ်
ခရစ်ယာန် တရားဟောဆရာ စောဒေးဗစ်လားနှင့် ဦးဝေထွန်းတို့ ကို အလုပ်နှင့် ထောင်ဒဏ်(၃)လ ချမှတ် ခရစ်ယာန်တရားဟောဆရာ စောဒေးဗစ်လားနျင့် ဦးဝေထွန်းတို့ကို အလုပ်နှင့်ထောင်ဒဏ် 3လ ချမှတ် ရန်ကုန်၊ သြဂုတ် –6ခရစ်ယာန်တရားဟောဆရာ စောဒေးဗစ်လားနှင့် ဦးဝေထွန်းတို့ကို အလုပ်နှင့်ထောင်ဒဏ် 3လ ကျခံရန် မရမ်းကုန်းမြို့နယ်တရားရုံးက […]
ဖေ့စ်ဘုတ်ပေါ်မှာတွေ့တဲ့ ယောက်ျားတစ်ယောက်အတွက်နဲ့ ခင်ပွန်းဖြစ်သူနဲ့သားလေးကိုထားခဲ့တဲ့ အမျိုးသမီး
ဖေ့စ်ဘုတ်ပေါ်မှာတွေ့တဲ့ ယောက်ျားတစ်ယောက်အတွက်နဲ့ ခင်ပွန်းဖြစ်သူနဲ့သားလေးကိုထားခဲ့တဲ့ အမျိုးသမီး ဖေ့စ်ဘုတ်ပေါ်မှာတွေ့တဲ့လူအတွက်နဲ့ ယောက်ျားဖြစ်သူနဲ့သားလေးကိုထားခဲ့တဲ့ အမျိုးသမီး။ ဖိလစ်ပိုင်တွင် သုံးဘီးစက်ဘီးနင်းစားရတာ အလွန်ခက်ခဲပါတယ်။ ပူလောင်တဲ့နေရောင်ခြည်အောက်မှာ ကြပ်ပိတ်လှတဲ့ကားလမ်းကို သည်းခံရင်း နာရီပေါင်းများစွာ အလုပ်လုပ်မှ ဝမ်းပြည့်ရုံလောက်သာရတဲ့ ဝင်ငွေနဲ့ ရေရှည်ရပ်တည်သွားဖို့  ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ ဖေ့စ်ဘုတ်မှာတွေ့တဲ့ လူတစ်ယောက်အတွက် ယောက်ျားဖြစ်သူနဲ့ သားလေးကို […]
တံတားကို နေ့ရောညပါ မိုးရွာရွာ နေပူပူ အမြဲတမ်း သန့်ရှင်းရေး လုပ်တဲ့ သူတစ်ဦး
တံတားကို နေ့ရောညပါ မိုးရွာရွာ နေပူပူ အမြဲတမ်း သန့်ရှင်းရေး လုပ်တဲ့ သူတစ်ဦး မြန်မာနိုင်ငံတော်တော်များများဟာ သူတစ်ပါး ကျေးဇူးကို အထူးသိတတ်တဲ့ လူမျိုးပါ။ ကိုယ့်အပေါ် ကျေးဇူးရှိဖူးသူ ၊ ကိုယ့်အပေါ် သင်ပြဖူးသူ မည်သို့သော သူဖြစ်ဖြစ် မြန်မာတွေဟာ ကိုယ်နှုတ်နှလုံး သုံးပါးစလုံးနဲ့ အခွင့်အခါသင့်တိုင်း ကျေးဇူးတရားးကို […]
ရွာက လူနာတွေအတွက် အသက်နဲ့ရင်းပြီး ခရီးနှင်နေတဲ့ စေတနာရှင် သားဖွားဆရာမလေး (ပုံကိုနှိပ်၍ ဖတ်ပါ)
ရွာက လူနာတွေအတွက် မြို့ပေါ်တက်ပြီး ဆေးဝါးပစ္စည်းတွေထုတ်ဖို့ ခရီးနှင်နေတဲ့ မြန်မာပြည်က သားဖွားဆရာမလေး ချင်းပြည်နယ် တီးတိန်မြို့ ကငင်ရွာလေးမှ မြို့ပေါ်တက် ကာကွယ်ဆေး ဆေးဝါး ပစ္စည်းမျိုးစုံ တစ်လ တခါနှုန်း ထုတ်ဖို့အတွက် ခက်ခက်ခဲခဲ ခရီးနှင်နေတဲ့ သားဖွားဆရာမလေးပါ။ မိုးရွာ မြေပြိုမူ့ တွေကြောင့် ခက်ခဲစွာ သွားလာရင်း […]
ဇာတ်ရံမို့ အနှိမ်ခံရတာတွေ ရှိသလို..အရံမင်းသမီးလေးကိုလည်း ချစ်ပေးကြပါ.. ဆိုတဲ့ ယွန်းရွှေရည်
ဇာတ်ပို့သရုပ်ဆောင်နေရာမှာသာ အစဉ်အမြဲသရုပ်ဆောင်ရလေ့ရှိတဲ့ ယွန်းရွှေရည်ကတော့ ဇာတ်ပို့နေရာမှာသာသရုပ်ဆောင်လေ့ရှိပေမယ့်.. သူမ၏ ပြောင်မြောက်ပီပြင် သဘာဝကျလွန်းလှတဲ့ သရုပ်ဆောင်ချက်တွေကြောင့် ဝန်းရံအားပေးသော ဖန်ျတွ အခိုင်အမာနဲ့ ပရိသတ်တွေရဲ့ ချစ်ခြင်းကိုရရှိထားသူတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ သူမပရိသတ်တွေက သူမကို ခေါင်းဆောင်မင်းသမီးအဖြစ်မြင်လိုကြပေမယ့် သူမအနေနဲ့ ဇာတ်ပို့အနေနဲ့သာ သရုပ်ဆောင်နေခဲ့ရတာ နှစ်ကာလ ကြာမြင့်ခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုဗစ်ကာလနဲ့ ကြုံလာရချိန်မှာတော့ အခြားသရုပ်ဆောင်များနည်းတူ […]
ပရိသတ်တွေ အားလုံး သိချင်နေကြတဲ့ နေခြည်ရွှန်းလဲ့ရဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်
မင်းသမီးချော နေခြည်ရွှန်းလက် ကတော့ MRTV -4 ဇာတ်လမ်းတွဲတွေမှာ ပါဝင် သရုပ်ဆောင်ရင်း အနုပညာလောကထဲကို စတင်ဝင်ရောက်လာခဲ့သူပဲဖြစ်ပါတယ်။ နေခြည်ရွှန်းလက် က ရှည်လျားလှပတဲ့ ဆံနွယ်ရှည်လေးကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အပြင် ပိန်ပါးကျစ်လစ်တဲ့ ကိုယ်ခန္ဓာ အချိုးအစားလေးနဲ့ လိုက်ဖက်ညီအောင် ဖက်ရှင်အလန်းလေးတွေကို ဝတ်ဆင် တက်တာကြောင့် ပုရိသတို့ အသည်းစွဲ အားပေးချစ်ခင်ရတဲ့ […]